DEG DEG: Horyaaladii Ugu Waa Weynaa Yurub Oo Burbur Ku Dhow & Qorshe Cusub Oo Si Rasmi Ah Daaha Loo Qaaday, UEFA & FIFA Oo Jawaab Kulul Bixiyay - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaDEG DEG: Horyaaladii Ugu Waa Weynaa Yurub Oo Burbur Ku Dhow & Qorshe Cusub Oo Si Rasmi Ah Daaha Loo Qaaday, UEFA & FIFA Oo Jawaab Kulul Bixiyay
DEG DEG: Horyaaladii Ugu Waa Weynaa Yurub Oo Burbur Ku Dhow & Qorshe Cusub Oo Si Rasmi Ah Daaha Loo Qaaday, UEFA & FIFA Oo Jawaab Kulul Bixiyay
April 19, 2021 Saed Mohamed Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka Premier League 0
Qorshihii horyaalka European Super League ayaa ugu danbeyn daaha laga rogay.
Warbixin la soo saaray xilli danbe xalay oo Axad aheyd ayaa lagu xaqiijiyay in 12 kooxood oo ka mid ah kooxaha ugu waa weyn Yurub inay dhisayaan tartan cusub oo la dheelayo bartamaha isbuuca.
Manchester United, Man City, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Liverpool, Juventus, AC Milan, Inter Milan, Real Madrid, Barcelona iyo Atletico Madrid ayaa dhamaantood ku biiray tartankaan iyadoo loo aqoonsaday inay yihiin aas-aasayaasha.
12kaan kooxood ayaa dhamaantood si rasmi ah uga baxay ururka kooxaha Yurub ee European Club Association.
Seddex kooxood kale ayaa la filayaa inay ku biiri doonaan inkastoo aan la magacaabin kooxaha ay yihiin iyadoo tartanka uu dhici doono sida ugu dhakhsiyaha badan.
Kooxaha aas-aasaya tartanka ayaa qeybsan doona 3 bilyan ginni oo maalgelin ah si looga caawiyo dhaqaale xumadii soo wajahday Korona Fayras darteed.
Waxay sheegeen inay haatan doonayaan inay wadahadalo la yeeshaan xiriirka kubada cagta Yurub ee UEFA iyo xiriirka kubada cagta Adduunka FIFA si ay uga wada shaqeeyaan qorshe wadajir ah.
Ka dib ku dhawaaqistaan, UEFA ayaa tiri: “Kooxaha ka qeybgalaya tartankaan waxaa laga mamnuuci doonaa inay ka dheelaan horyaalada dalalkooda, tartamada Yurub ama kuwa heerka caalami, iyadoo ciyaartoyda laga mamnuuci doono inay matalaan xulalkooda.”
FIFA ayaa iyadana tiri: “Waxaan kaliya shaacin karnaa inaan ka soo horjeedno kooxaha ka go’aya horyaalada Yurub iyo kubada cagta caalamiga ah.”
Warbixinta ay soo saareen xalay horyaalka cusub ee European Super League ayaa lagu sharaxay sida uu noqonayo qaabka tartanka cusub.
20 kooxood ayaa ka qeybgaleysa tartanka oo 15 ka mid ah ay noqonayaan aas-aasayaasha, halka shan kooxood kale ay ku soo bixi doonto wixii ay kasbadeen xilli ciyaareedkii ka horeeyay.
Kulamada bartamaha isbuuca waxaa ka qeyb geli doona kooxaha horyaaladooda u tartamaya oo dhan iyadoo la ilaalinayo jadwalka tartamada maxaliga ah oo udub dhexaad u ah kooxaha.
Tartanka wuxuu bilaabanayaa bisha Agoosto iyadoo labo Group oo min 10 kooxood ah loo qeybinayo, waxay kooxaha u dheelayaan minan iyo marti iyadoo seddexda kooxood ee ugu sareysa group walba ay u soo gudbi doonto wareega sideed dhamaadka.
Kooxaha ku dhameysta kaalimaha afaraad iyo shanaad ayaa dheeli doona labo lug oo kala bax ah taasoo dhameystiri doonta sideeda kooxood ee wareega sideed dhamaadka. Wareega sideeda iyo semi-finalka waa labo lug halka finalka lagu dheeli doono garoon dhexdhexaad ah bisha May.